Matongerwo eNyika, 03 Kukadzi 2019
Kukadzi 03, 2019
Chingwa Chowedzerwa Mutengo
Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema nekuti vafuma nhasi mutengo wechingwa wawedzerwa zvakanyanya.
Huwandu HweVanhu Vafa neKupfurwa Kana Kuitwa Kafiramberi neMauto neMapurisa Horamba Huchiwedzera
Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights kana kuti ZADHR rinoti huwandu hwevanhau vashaya pachipomerwa mauto nemapurisa mhosva yekuvapfura kana kuvaita kafiramberi hwasvika pagumi nevatanhatu.
Kukadzi 02, 2019
VaMnangagwa Vanotedza Kuenda kuMt Darwin Kunotenda Vatsigiri Vavo
Mutungamiri wenyika, uye varizve mutungamiri weZanu PF, VaEmmerson Mnangagwa, vatadza kuenda kumusangano wavo kuMt Darwin nezvikonzero zvine chekuita nemhirizhonga yakaitika munyika masvondo maviri apfuura.
Vanhu Vafa Mushure meKurohwa neMauto neMapurisa Vosvika paGumi neVashanu
Mumwe chiremba akabatsira VaSahumbe vari nhengo yeZADHR Doctor Milton Marowa vanoti vakayedza zvose zvavanogona kuvabatsira asi zvakakona nekuti vainge vanyanya kukuvara.
Nyanzvi Dzinoti Huori, Kutyora Kodzero Zvimwe Zvauraya Zimbabwe
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzehupfumi dzinoti kusaremekedzwa kwemitemo, huori uye kutadza kufambiswa kwemari dzenyika nemazvo, zvimwe zvezvinhu zviri kukonzera kuti Zimbabwe ipinde parumananzombe pairi.
Mutungamiri weNyika VaMnangagwa Vanomanikidza Makomishina eZACC Kusiya Basa
Komisheni inoona nezvekurwisa huori inonzi yakamanikidzwa kusiya basa nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa ichipomerwa mhosva yekutadza kuchuchisa nyaya dzehuori munyika zvikuru dzemamwe makurukota ainge ari muhurumende yevaive mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe
Vagari Vodyira Marasha Kanzuru yeMasvingo
Vagari vemudhorobha reMasvingo vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nekanzuru yavo nezuro rekuti itengere vakuru vemapazi nharembozha dzichadya mari inodarika zviuru makumi matanhatu zvemadhora ekuAmerica.
VaChibaya Voramba Vari Mutirongo Kusvika neMugovera
Mumiriri weMkoba muparamende, VaAmos Chibaya, vacharamba vari mutirongo kusvika musi weMugovera zvichitevera kubvuma kwaita mumwe mutongi wedare chikumbiro chemuchuchisi chekuti varambe vari muhusungwa mapurisa achipedzisa kuferefeta nyaya iyi.
Zimbabwe Council of Churches Yoita Musangano neNhengo dzeParamende
Vachitaura mushure memusangano waitwa neChina pakati penhengo dzeZimbabwe Council of Churches nenhengo dzeparamende muguta reHarare, Mufundisi Emmanuel Maforo, vati matambudziko ese ari munyika ari kukonzerwa nezvematongerwo enyika, nokudaro anofanirwa kugadziriswa.